I-5G, itekhnoloji yesizukulwane sesihlanu setekhnoloji yoqhakamshelwano lweselfowuni sisizukulwane esitsha setekhnoloji yonxibelelwano yeselfowuni eneempawu zesantya esiphezulu, ukulibaziseka okuphantsi kunye nonxibelelwano olukhulu. Sisiseko sothungelwano ukuqonda umatshini womntu kunye nokunxibelelana kwento.
I-Intanethi yezinto zezona zixhamli ziphambili ze5G. Eyona nto iphambili ekuqhubeni i-5G ayisiyomfuno ekhulayo kuphela yabathengi yothungelwano olukhawulezayo, kodwa kunye nokwanda kwezixhobo zonxibelelwano kwindawo yemizi-mveliso. La mashishini athembela ngakumbi kwizixhobo zonxibelelwano ukuqokelela kunye nokuhlalutya idatha, ukwenza iinkqubo zeshishini ngakumbi, ukuphucula imveliso, kunye nokuphucula ngokuqhubekayo iimveliso kunye neenkonzo. I-5G kulindeleke ukuba incede amashishini ukuba alawule ngokukuko inani elikhulayo lolwazi oluveliswe yi-Intanethi yezinto, kunye nokuphucula umyalezo okhawulezileyo ofunekayo kwimishini ebalulekileyo yeenkonzo ezinje ngotyando oluncedwayo lwerobhothi okanye ukuqhuba ngokuzimela.
Isetyhula kunye nesikhethi sesinye sezixhobo ezingundoqo zezitishi zesiseko se5G. Yonke inkqubo yonxibelelwano yeselfowuni ngokubanzi yenziwe ngezixhobo zonxibelelwano ezihambayo, inkqubo yokugubungela unxibelelwano ngefowuni kunye neemveliso zonxibelelwano zeselfowuni. Isikhululo esisisiseko sesixhobo esisisiseko sonxibelelwano ngeselula. Inkqubo yesitishi esisiseko ihlala iqulathe isiphelo sangaphambili se-RF, isiseko sesitishi sokuhambisa kunye nesikhululo sesikhululo. Indawo yokugqibela ye-RF inoxanduva lokucoca umqondiso kunye nokuzihlukanisa, isikhululo sesikhululo sesikhululo sinoxanduva lokufumana umqondiso, ukuthumela, ukukhulisa kunye nokunciphisa, kwaye umlawuli wesikhululo sesiseko unoxanduva lokuhlalutya umqondiso, ukuqhubekeka kunye nolawulo lwesikhululo sesiseko. Inethiwekhi yokufikelela ngaphandle kwamacingo, isetyhula isetyenziselwa ukwahlula umqondiso wokuphuma kunye nomqondiso wokufaka wesitishi se-eriyali yesikhululo. Ukusetyenziswa okuthe ngqo, isetyhula inokufezekisa le misebenzi ilandelayo kunye nezinye izixhobo:
Inokusetyenziswa njenge-eriyali eqhelekileyo;
2. Ngokudityaniswa ne-BPF kunye nokunciphisa ngokukhawuleza, isetyenziswa kwisekethe yokuqhekeka kwamaza;
3. Isiphelo sokuxhathisa sidityaniswe nomjikelezo wangaphandle njengesihlukanisi, oko kukuthi, umqondiso ligalelo kunye nemveliso kwizibuko elichongiweyo;
4. Qhagamshela i-ATT yangaphandle kwaye uyisebenzise njengesetyhula enomsebenzi wokufumanisa amandla.
Njengenye yezona zinto zibaluleke kakhulu, iziqwenga ezibini ze Iimagnethi zediskhi yeSamarium Cobaltukubonelela ngemagnethi eyimfuneko ekuthandeni isiphambuka esilayishwe ngeferrite. Ngenxa iimpawu nokumelana ezibalaseleyo kunye nozinzo yokusebenza phezulu ukuya kuma-350 ℃ izidanga, zombini SmCo5 kunye Sm2Co17 iimagnethi zisetyenziswa iisetyhula okanye zodwa.
Ngokusetyenziswa kwetekhnoloji ye-MIMO enkulu ye-5G, ukusetyenziswa kwabajikelezi kunye nabodwa kuye kwanda kakhulu, kwaye indawo yentengiso iya kufikelela kumaxesha ali-4G. Kwixesha le-5G, imfuno yesikhundla senethiwekhi iphezulu kakhulu kunaleyo ye-4G. I-MIMO enkulu (i-Multiple-Input Multiple-Output) yenye yeetekhnoloji eziphambili zokuphucula ubungakanani benethiwekhi. Ukuxhasa le teknoloji, inani lamajelo e-eriyali e-5G liya kunyuka ngokubalaseleyo, kwaye inani lezitishi ze-eriyali enye yecandelo liza kunyuka lisuke kumjelo we-4 kunye ne-8 yamajelo kwisithuba se-4G ukuya kumajelo angama-64. Ukuphindaphindwa kwenani lamajelo kuya kukhokelela kukonyuka okubonakalayo kwimfuno yeesetyhula ezihambelana nazo kunye nezodwa. Kwangelo xesha, kwiimfuno zobunzima kunye nokwenza izinto ezincinci, iimfuno ezintsha zevolumu kunye nobunzima zibekwa phambili. Ukongeza, ngenxa yokuphuculwa kwebhendi esebenza rhoqo, ukungena komqondiso kuhlwempuzekile kwaye ukucuthwa kukhulu, kwaye isiseko sesitishi soxinano lwe-5G siya kuba ngaphezulu kune-4G. Ke ngoko, kwixesha le-5G, ukusetyenziswa kwabajikelezisi kunye nabodwa, emva koko iimagnethi zeSamarium Cobalt ziya kunyuka ngokubonakalayo.
Okwangoku abavelisi abaziintloko besetyhula / bodwa kwihlabathi liphela kubandakanya i-Skyworks e-USA, SDP eCanada, TDK eJapan, HTD e China, njl.